Kedu ihe kpatara Sampmax
Ogwe ndị a tụrụ atụ
Ihe owuwu ụlọ
Sistemụ ihe owuwu ụlọ nke oge a na -awụpụ bụ usoro ihe atụ nwa oge iji hụ na a wụsara ihe ahụ n'ime ihe owuwu dị ka ihe eji achọ ya. Ọ ga -ebu ibu kwụ ọtọ na ibu kwụ ọtọ n'oge a na -ewu ya.
Ihe owuwu ụlọ a na-eji arụ ụlọ arụnyere bụ nke akụkụ atọ mejupụtara: ogwe (ihe nkiri chere ihu plywood & plọm aluminom & plywood plastik), ihe nkwado na njikọta. Ogwe ahụ bụ bọọdụ na -amị mkpụrụ; Ọdịdị na -akwado ya bụ ịhụ na ejikọtara usoro nhazi ụlọ ahụ nke ọma na -enweghị nkwarụ ma ọ bụ mmebi; ihe njikọ ahụ bụ ngwa na -ejikọ panel na usoro nkwado n'ime otu.
A na -ekewa usoro nhazi ụlọ ka vetikal, kehoraizin, ọwara mmiri na sistemụ arụ ọrụ akwa. A na-ekewa mpempe akwụkwọ kwụ ọtọ na nhazi mgbidi, kọlụm kọlụm, mpempe akwụkwọ nwere otu akụkụ, na ịrị elu akwụkwọ. A na -ekekarị mpempe akwụkwọ kwụ ọtọ ka àkwà mmiri na ụzọ ụzọ. A na -eji ihe eji arụ ọrụ ọwara maka ọwara okporo ụzọ na ọwa nke ogbunigwe. Dị ka ihe ahụ si kwuo, enwere ike kewaa ya n'ụdị osisi na arụ ọrụ nchara. , Aluminium ebu na plastik formwork.
Uru nke ụdị akụrụngwa dị iche iche:
Dịtụ nfe, dị mfe iji wuo, yana ọnụ ala, mana ọ nwere ogologo adịghị ike yana ọnụego iji ya dị ala.
Ike dị elu, ọnụego nkwughachi dị elu, mana ọ dị oke arọ, ihe na -adịghị mma, yana oke ọnụ.
Aluminom alloy nwere ike kachasị elu, anaghị agba nchara, enwere ike megharịa ya n'ọtụtụ buru ibu, nwere ndụ ọrụ kacha ogologo yana ọnụego mgbake kachasị. Ọ dị arọ karịa nhazi osisi, mana ọ dị mfe karịa ụdị nchara. Mwube kachasị adaba, mana ọ dị oke ọnụ karịa ụdị osisi na ntakịrị ọnụ karịa ụdị nchara.
Sistemụ mgbanaka mgbanaka mgbanaka
Scaffolding na -ese